भारतमा कोरोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको मृत्यु – Health Post Nepal
२०७७ जेठ ११ गते १७:१७
कोरोना भाइरसका कारण अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) का सेवा निवृत्त डाक्टरको मृत्यु भएको छ।
एम्स अस्पताल पल्मोनोलोजी विभागका निर्देशक डाक्टर जितेन्द्रनाथ पाण्डेको कोरोना भाइरसका कारण ७८ वर्षको उमेरमा शनिबार मृत्यु भएको हो। उनी केही सातादेखि कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा प्रिमियर अस्पताल खटिएका थिए।
कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर पाण्डे र उनकी श्रीमतीले मंगलबार स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। भाइरसको लक्षण देखिएपछि उनी घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए। एम्स अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरियाले शनिबार पाण्डेको कोरोनाबाट निधन भएको जानकारी दिएका छन्।
‘हामी डाक्टर पाण्डेलाई नियमित पछ्याइरहेका थियौ, उनको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको थियो। उनी शनिबार खाना खाएर सुत्न गएका थिए सम्भवतः हृदयघातका कारण उनको मृत्यु भयो,’ एम्सका निर्देशक गुलेरियाले भनेका छन्।
एम्स अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएका डा. पाण्डे कोरोना भाइरस महामारीको समयमा प्रिमियर अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएका थिए। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले डाक्टर पाण्डेलाई ट्विटमार्फत श्रद्धाञ्जली दिएका छन्।
‘लामो समयसम्म एम्स अस्पतालमा काम गरेका डा. पाण्डेप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली। सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त भए पनि महामारीको बेला कोरोना नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिनुभएको छ। तपाईलाई दिल्लीको सलाम,’ केजरीवालले ट्विटरमा लेखेका छन्।
अपोलो अस्पतालकी निर्देशक डाक्टर संगीता रेड्डीले कोरोना भाइरस सबैभन्दा खतरानाक भएको बताएकी छन्।
‘कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी पीडित डा.पाण्डे भए। हामिले चिकित्साजगतका एक महान हस्ती गुमाएका छौं। जुन धेरै दुःखलाग्दो छ, मृतकको परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली,’ रेड्डीले भनेकी छन्।